Fandalovan’ny rivodoza Enawo : Nanome fanampiana 50 tapitrisa Ar ny HVM -
AccueilRaharaham-pirenenaFandalovan’ny rivodoza Enawo : Nanome fanampiana 50 tapitrisa Ar ny HVM
10/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Voin-kava mahatratra”. Izay no azo hamehezana ireo fahavoazana tamin’ireo faritra maro nandalovan’ny rivodoza Enawo.
Araka izay indrindra, nahatsapa ny avy amin’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) fa maro ireo faritra sy mponina tra-pahavoazana tamin’ny fandalovan’iny rivodoza iny. Noho izany, nitondra fanampiana ho an’ny Faritra rehetra ny HVM, notarihin’ny filohany, Rivo Rakotovao. Omaly mantsy, natolotr’izy ireo teny amin’ny BNGRC, ny fanampiana, vola mitentina 50 tapitrisa Ar, natokan’izy ireo ho an’ireo faritra maro manerana ny Nosy izay niharam-boina. Mahatsapa mantsy ny antoko HVM fa mafy ary namela takaitra iny rivodoza Enawo iny. Izay indrindra no nahatonga azy ireo nidodododo nanatitra io fanampiana io teny amin’ny BNGRC ka ity farany ihany no mitsinjara ireo fanampiana amin’ireo faritra maro tokony hiantefan’izany.
Hatreto, mbola ny HVM irery ihany no antoko politika nanefa ny adidiny ho an’ny mpiara-belona izay niharam-boina manerana ny Nosy. Nambaran’ny filoha nasionalin’ity antoko manohana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity fa betsaka ny fahasimbana naterak’iny rivodoza Enawo iny. Namela takaitra ho an’ny faritra maro teto amintsika ka noho izay indrindra no nanosika azy ireo nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanohanana sy fanampiana ireo niharam-boina sy tra-pahavoazana. “Amin’ny fotoana toa izao indrindra no tokony hampisehoantsika ny firaisan-kina mba hanampiana ny mpiray tanindrazana sy ny mpiara-belona amintsika”, hoy ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao.